HABDHISKAAGA DIFAAC KOR UQAAD – WARSOOR
Cunista dufanka yar, cuntada ku saleysan dhirta ayaa gacan ka geysaneysa kordhinta nidaamka difaaca. Habka difaaca wuxuu ku tiirsan yahay unugyada dhiiga cad ee soosaaro unugyada ka hortaga bakteeriyada, fayraska, iyo duullaanka kale. Khudaarta cagaaran ayaa la muujiyay inay leeyihiin unugyada dhiiga cad ee waxtarka leh marka la barbar dhigo kuwa aan ahayn kuwa aan aqoonta lahayn, sababtuna tahay fiitamiinada badan iyo qaadashada dufanka yar.
Daraasado la sameeyay ayaa muujiyey in miraha iyo khudradda ay bixiyaan nafaqooyinka — sida beta-carotene, fiitamiin C, iyo fiitamiin E-oo xoojin kara shaqada iska caabbinta. Sababtoo ah khudaar badan, miro, iyo cunnooyinka kale ee ku saleysan dhirta ayaa sidoo kale hodan ku ah in sunta la yareeyo, waxay gacan ka geystaan ​​yareynta walwalka.
Beta-carotene waa antioxidant awood leh oo yareyn kara bararka isla markaana kor u qaadi kara shaqada iska caabbinta iyadoo la kordhiyo unugyada la dagaallanka cudurrada ee jirka.
Ilaha aadka u wanaagsan waxaa ka mid ah baradhada macaan, karootada, iyo khudradda cagaaran.
fiitamiinada C IYO E waxa ay ka qayb qaataan habka difaaca in kor loo qaado. Meelaha laga heli karo waxa ka mid ah:-
Meelaha laga heli karo fiitamin E
Faytamiin D: Daraasad ayaa muujineysa kaabista fiitamiin D-ga waxay yareyn kartaa halista cudurada fayruuska, oo ay kujiraan caabuqyada neef-mareenka, iyadoo la yareynayo habka ay xanuun ugu sababi karaan jirka.
Kordhinta fitamiin D-ga ee dhiiga ayaa lala xiriiriyay ka hortagga cudurada kale ee daba-dheer ee ay ka mid yihiin qaaxada, cagaarshow, iyo cudurrada wadnaha. Ilaha cuntada ee laga helo fitamiin D-ga waxaa ka mid ah dalagyada iyo caanaha.
cuntooyinka laga helo :-
Zinc: Zinc waa macdan wax ka tari karta kor u qaadida unugyada dhiiga cad, kuwaas oo ka difaacaaya duulaanka. Ilaha waxaa ka mid ah lawska, miraha bocorka, miraha sisinta iyo digirta.
Jidhkeenu wuxuu u baahan yahay hurdo inuu ku nasto oo uu dib u buuxiyo. Iyadoo aan la helin hurdo kugu filan, waxaan sare u qaadnaa halista aan ugu jirno dhibaatooyinka caafimaad ee halista ah – sida cudurrada wadnaha, cudurka Alzheimer, iyo cayilka. Hurdo aan ku filneyn ayaa sidoo kale lala xiriiriyay shaqada xakameynta xakameysan.
Hal daraasad ayaa lagu ogaaday in kuwa seexanaya wax ka yar shan saacadood habeenkiiba ay u badan tahay inay dhawaantan la soo derseen hargab marka la barbardhigo kuwa seexda in ka badan.
Ma u baahan tahay caawimaad hurdada? Isku day inaad ku darto khudraddaada miraha, khudradda, badarka, iyo digirta. Hal daraasad ayaa lagu ogaaday in cuntooyinka hodanka ku ah faybarka iyo dufanka ay ku yar yihiin ay horseedi karaan hurdo qoto dheer oo naftaada raaxo galisa.